Ni jiraanna jenneeti malee balleesinee baduun nun dhibu. Oromia Shall be Free |
Ni jiraanna jenneeti malee balleesinee baduun nun dhibu.
bilisummaa December 27, 2015	Comments Off on Ni jiraanna jenneeti malee balleesinee baduun nun dhibu.
JECHOOTA ajaa’ibaa kan taaksii keessatti barreefamanii jiran.
1 Ni jiraanna jenneeti malee balleesinee baduun nun dhibu.
2 Umurii nuti qabnu jeequmsaaf mitii jaallachuufu nun geessuu.
3 Qophummaan kan bareedu mana fincaanii keessatti qofa.
4 Aangoon kan ittiin uummata bulchan malee kan ittiin uummata doorsisan miti.
5 Kanan rafuuf kan hin rafne gooftaa waanan qabuufi.
6 Hangam yoo tureyyuu harmii fi mootummaan kufuunsaa hin oolu.
7 Fuula inaaffaan guraachesse qibaatiin hin cululysu!
8 Utuu durbi lafa qotuun argamti ta’ee dhiirri hunduu qote bulaa ta’ee dhuma.
9 Nama hin tuffatin hinjiraanniyyuu surree nama hiikachiisti.
10 Bara re’ee ta’amutti hoolaa hin ta’in.
11 Utuu barnootni dulaadhaan namaa gala ta’e harreen piroosoofera taati turte.
12 Utuu baalli mukaa qarshii ta’ee dubarri qalamee jaallatti!
13 Anaan hiyyeesa nan jette atimo boorsaa duwwaaf daalleekee malee maal qabda.
14 Utuu daawitii (of ilaalii) dhaaf ni kaffalama ta’ee dubartootni meeqa kaffalu?
15 Hangafti tooftaa jireenya wal danda’ud
Previous ETHIOPIA A FAILED STATE!
Next Hoogganoota moo Hoongayoota? Leaders or Loosers?